एक चुक्यो बिना मत्स्य पालन: आक्षेप लागि निपल
माछा मार्ने फरक नाम छ लागि यो निपटने। यस प्रकारका धेरै घर को जग banal एक शैम्पेन काग भएकोले, यो एक "डाट" भनिन्छ। "साथी" - सबै निर्देशनहरू मा फैलएको हुक को कारण। तर सबै को सबै भन्दा - केवल "काल्पनिक"।
शीर्षक आंशिक गियर को संयन्त्र द्वारा विशेषता छ। एक पटक निपल कुनै भन्दा कम तीन हुक लुकेको छ जो भित्र पानी चारा मा आक्षेप, लागि हो, बिस्तारै भिजेको र आफ्नो गन्ध वरिपरि फैलाउन थाल्छ। उहाँबाट आकर्षित, crucian आक्षेप, पहिलो धीरे चारा, यसलाई चूसने भने खींचती। कुनै खतरा पत्ता, यो साहसी कसैले प्रशोधन सुरु हुन्छ र अन्ततः हुक, जो, निगल noticing बिना को एक मुक्त गर्नु। टिप संवेदन, माछा उम्कन र तुरुन्तै samozasekaetsya गर्न खोज्छ।
एक देखि यो हात संकलित गर्न सकिन्छ, कुनै कारण छ बजार मा निपटने किन्न। कसले कसरी आक्षेप मा निपल बनाउन कुरा हुनेछ।
सबैभन्दा सफल डिजाइन को एक को दिल मा polutoramillimetrovoy को गरे फिडर-वसन्त छ स्टेनलेस स्टील तार। बंधुआ leashes हुक को छ जोडी जाली (№6वा 7) भित्र शीर्ष पाश वसन्त बोट सँगै राख्न र बाँध्न छन्। लुपमा leashes संग हुक कम अन्त उत्तेजित गर्दछ थिए यस्तो तरिकाले वसन्त coils को सुरुमा कडा छ।
यो निपल चारा को भूमिका खेल्दै एकै समयमा, आक्षेप चारा plastered वसन्त लागि सशस्त्र छ। त्यसपछि हुक तल देखि विभिन्न पक्ष बाट पायो र गोलाकार टिप चारा मा लुकाउन छन्। Curb को carabiner गर्न clings निपटने।
अर्को सरल डिजाइन एक पलीथीन बोतल को ढक्कन देखि निर्माण गर्न सकिन्छ। एक बोल्ट र नट 20-30 ग्राम, ढकने को व्यास बराबर वजन धातु वशर संलग्न कहिले यसको बाहिरी पक्ष द्वारा आवश्यक छ। उहाँले शायद यो बाहिर उभिए पागल घुमाई पछि नट कवर भित्र हुनुपर्छ भनेर बोल्ट को लम्बाइ रोजेको हुनुपर्छ। आक्षेप लागि भार निपल संग टाढा र सही पानी मा गुजर। 4-5 सेमी लामो प्वालहरू हुक संग को सुराकी - ढक्कन को एक हात पक्ष भित्तामा अन्य मा, एक माछा मार्ने लाइन संलग्न लागि प्वालहरू ल्यायो। एक पटक टोपी चारा भरिएको र, उनको लुकाउनुहोस् हुक त्यागेर Tackle तयार छ।
को pacifier आक्षेप निर्माण कसरी को विधिहरू बीच, मूल डिजाइन को सबै भन्दा एक काटिएको चम्चा ह्यान्डल देखि बनेको छ। को चम्चा स्टेनलेस स्टील वा निकल चाँदी गर्नुपर्छ। तार को सानो लूपहरूको लागि खुलने - सानो पुच्छर भन्दा काटन देखि, एक माछा मार्ने लाइन संलग्न लागि प्वाल ड्रिलिङ, बायाँ विपरीत पक्षमा। यी लूपहरूको र leashes हुक संग संलग्न छन्। प्रत्येक हुक एक साथ प्रदान गरिएको छ , फोम बल मुक्ति बेला चारा बाहिर प्राप्त गर्न त सजिलो। यो केवल थप फेंक गर्न सक्दैन, त्यसैले पनि सही Curb चारा निपल, एक सुव्यवस्थित आकार छ।
रिसेपी को आक्षेप परीक्षण गर्न को लागि "खाना"। तिनीहरूले पानी सतह मारा जब बढ्तै हार्ड चारा crumble। धेरै टाँसिएको को हुक देखि नै जारी छैन। र, बाहेक, यो लामो पर्याप्त पानी मा बाँच्न पर्छ। निपल लागि सही चारा मोडेलिंग माटो को स्थिरता छ: यो घनत्व सूजी दल्नु थप्दा, गहुँ देखि पकाएको गर्न सकिन्छ।
यस्तो माछा पकडने गर्न "सही" को प्रशंसक Tackle unsportsmanlike मानिन्छ। यसबाहेक, किनभने यसको पक्रने क्षमता र हुक संख्या को आक्षेप लागि निपल अर्द्ध-कानुनी मानिन्छ, र केही ठाउँमा र poaching। तपाईं माछा मार्ने लागि निपटने जाने अघि, त्यहाँ सट्टा एक जोखिम आक्षेप "क्याच" उनको सभ्य दण्ड छ कि छैन भनेर सोध्न छ।
डुङ्गा reversing: उत्पादन लागि निर्देशन र माछा मार्ने को रहस्य। माछा मार्ने डुङ्गा लागि Groundbait
अड्डा वसन्त कताई पक्रने र jigging
आफ्नै हातमा कसरी makushatnik गर्छन्?
Seymovoy मलम: निर्धारण समीक्षा, फोटो
अष्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स नीलो पहाड: विवरण, समीक्षा
लाभ फिलिप्स multivarok
भन्दा एलर्जी rhinitis उपचार गर्न? परम्परागत र लोक विधिहरू को उपचार
Smirnova Aleksandra, सम्मान को दासी: जीवनी, मूल
Basketry। के तपाईं यसलाई एक शौक कल गर्छन्, तपाईंलाई थाहा?
को सीमा अवधिको समाप्ति को को नतिजा। सीमितता को विधान को प्रकार
Brilev Sergey: जीवनी, फोटो, परिवार